ISTICMAALKA SUNTUUGA: SIFOOYINKA WANAAGSAN IYO WAXYEELADA - DAAWADA DADWEYNAHA
Safflower: halabuurka, isticmaalka, hantida faa'iido iyo khilaafaadka
Safflower (thistle ama saffron American) waa warshad sannadle ah, oo gaarta dhererka 1.5 mitir, isagoo leh stem dhalaalaya, caleemo ballaaran oo leh daloolo ku yaala geesaha iyo ubaxyo orange ama jaalle ah. Sida qaalibka ah wuxuu u koraa sida warshadda cawska, laakiin mararka qaarkood koray sida mid dhaqan leh.
Ma taqaanaa? Masar hore, geedka waxaa loo isticmaalay mummification - faashado ayaa lagu qooyay.
Waxyaabaha kiimikada ee safflower
Ubaxyada dhirta ayaa ku jira fitamiinnada A, C iyo D. Intaa waxaa dheer, glycosides, magnesium, birta iyo walxo kale oo macdan ah ayaa ku jira ubax. Saliidda shinnida waxaa ku jira kiimiko badan oo dufan leh. Seeds sidoo kale waxaa ku jira khamriga lignan.
Waa maxay waxyeelladu waxtar u leedahay?
Marka la eego hantida firfircooni, safflower waxay heli kartaa waxyaabo badan oo faa'iido leh:
xayawaanka dhiigga, sidaas darteed kor u qaadista wareegga dhiigga;
wakiil ka-hortagga cudurka psoriasis iyo burooyinka maligantiga;
waxay ka caawisaa dhimista miisaanka;
Waxay hagaajisaa waxqabadka maskaxda;
faa'iido leh dadka buka ee qaba hypertensive;
Waxay xoojisaa difaac.
Hase yeeshee badi caajisku waxaa loo yaqaana geedka, isticmaalka taas oo ah nooc ka mid ah cufnaanta nafleyda ayaa faa'iido u leh miisaanka.
Safflower Honey - Aad dhif u ah, sababtoo ah kalluunku ma aha warshad malab ah, wuxuu u barabaxaa wakhti gaaban wuxuuna bixiyaa nectar yar. Malabka Safflower wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, maadaama ay hodan ku tahay fitamiinada iyo nafaqooyinka, sida kalsiyum, birta, fiitamiinada E, C, PP iyo kooxda B. Daawada malab waxaa loo isticmaalaa arthritis, cudurada maqaarka, jarista iyo gubashooyinka; malab waxaa loo isticmaali karaa cudurrada dhuunta - waxay soo saartaa saameynta suuxdinta, waa waxtar u ah hurdo la'aan.
Malabka Safflower sidoo kale waxaa loo isticmaalaa gudaha cosmetology. Maskaxda ku salaysan waxay ku fiican tahay timaha iyo timaha.
Si loo hagaajiyo loona ilaaliyo difaac, subax kasta waxaad u baahan tahay inaad cabto calool madhan oo biyo leh malab la badiyey (1 koob oo ah 2 shaambe).
Waa muhiim! Sababtoo ah xaqiiqda ah in malabku sida aadka ah u yaryahay, waxaa badanaa lagu dhejiyaa. Ha fiirsanin midabka cagaarka ah ee dhalaalaya, malab cusub - hufan oo leh jilicsanaan huruud ah, malab barafaysan - saloobrazny midab huruud ah.
Shaaha Safflower waxaa lagu talinayaa in la cabo si loo nadiifiyo hababka dheef-shiid kiimikaadka, daaweeyo qanjirada iyo boogaha, waxay faa'iido u tahay cudurrada beerka iyo kelyaha, dhiigga khafiifiya, waxay cadaadisaa cadaadiska dhiigga. Diyaarinta shaaha waa sahlan tahay: waxaan qaadanaa 1/4 shaaha oo midab leh (ha ku darin shaaha kale), ku shub weel weel ku shub biyo karkaraya, ku dhaji qiyaastii nus saac, ka dibna xaddid. Waxaa lagu talinayaa inaad cabto hal koob oo ka hor wakhtiga jiifka, laakiin waxaad cabi kartaa dhowr maalin oo dhan. Ka dhig shaaha meel qallalan oo qabow.
Waa muhiim! Shaah baraf ah oo American ah ayaa kordhiya saamaynta duriinka, qofku waxaa laga yaabaa inuu dareemo dhiirigelin si uu u kaadi-haysto kaadi heysta. Xaaladdan, waa inaad shaaha ka saartaa dhowr asbuuc.
Saliideedkan qiimaha leh ee ku dhow xayawaanka, waxaa laga heli karaa dukaamada iyo farmasiyada, laakiin waxaa fiican inaad ka iibsato qaybaha aromaterapyka. Saliidda ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa miisaanka luminta, hagaajinta shaqada wadnaha, nadiifinta weelasha dhiigga, hagaajinta maqaarka iyo timaha. Sidoo kale waxay faa'iido u leedahay bukaanka qaba sonkorowga mellitus: hoos u dhig heerka sonkorta iyo ka saarista dufanka xad-dhaafka ah.
Faa'iidooyinka caafimaadkaaga wuxuu keeni doonaa saliid toon, qandhicir, kartuun, roodhid, fuuf.
Isticmaal daawada: cuntada cuntada ee dadka
Muddo dheer, geedka sanadlaha ah waxaa loo isticmaalay daawada sida calool jilciye, suuxdinta iyo wakiil daaweynta cudurrada wadnaha.
Maanta, guryaha antioxidant iyo anti-bararka ayaa laga helaa geedka, sidoo kale waxay yareyneysaa guud ahaan kolestaroolka, waxaa loo isticmaalaa sonkorowga.
Daawada dadweynaha Safflower waxaa loo isticmaalay qarniyo badan. Waxay ka caawisaa in lagu daweeyo burooyinka, loo isticmaalo sida daaweynta dhaawacyada iyo dhaawacyada.
Ma taqaanaa? EXitaa qarnigii 11-aad ee Shiinaha, xayawaanka duurjoogta ah ayaa loo isticmaalay in lagu daweeyo gumaacsiga.
Oo hadda waxaan la kulmi doonaa cuntooyin caan ah oo la isticmaalayo isticmaalka sigaarka.
Feejignaan hal qaado oo hal qaado ah hal mar maalintii.
Mucaaradka dhulka waxaa lagu daraa shaambo, taas oo ka caawisa ka hortagga xiirashada.
Saliidda ayaa lagu daraa kiriimka qorraxda ee 1: 5.
Ku dar si aad u hesho daryeel maqaarka madaxa ah iyo timo (1 qaado oo ah 100 ml).
Ka horjeeda couposis waxay ku dabooshay maqaarka qaabkeeda saafiga ah.
Ku dar kiriimyada maqaarka ama maqaarka.
Waxaa loo isticmaalaa sida saliid duugista ah maqaarka qalalan.
In karinta - ku dar saladh halkii saliid gabbaldayaha.
Haddii aad go'aansato inaad iibsato safflower ee "Grandma" ee suuqa, waa inaad kala sooc saffron: geedka ugu horeeya wuxuu leeyahay ur aan caadi aheyn, ubaxu waa kala duwanyihiin jilicsan oo huruud ah, oo ka kooban inflorescences yar.
Haddii aad tahay taageeraha qaababka dhaqanka ee daaweynta, dhirta daawooyinka, sida echinacea, nasturtium, gallol, geedka, gentian, sage, waxay u badan tahay in ay buuxsamaan xirmadaada gargaarka koobaad.
Safflower laguma talinayo in loo isticmaalo dhiigbaxa uterineine, maadaama uu qallajiyo dhiigga wuxuuna kordhin karaa ama keeni karaa dhiigbaxa.
Waa ka hortag u isticmaalida inta lagu guda jiro uurka - waxay dhalin kartaa dhalmo goor hore.
Laguma isticmaali karo marka qofku uu dhibaato ka qabo habka caloosha iyo mindhicirada, iyo shakhsiyad xumo shakhsi ahaaneed.
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahaa in aan xusuusiyo in caajisnimada, inkasta oo ay u egtahay sida argagaxa, laakiin ka hor intaan la isticmaalin waa lagama maarmaan in la tasho dhakhtar.